ခုချက်ချင်း အကြွေး သွားဆပ်မယ်…မဟုတ်ရင် အမကြီး သေလိမ့်မယ် – Shwe Thadin
ခုချက်ချင်း အကြွေး သွားဆပ်မယ်…မဟုတ်ရင် အမကြီး သေလိမ့်မယ်
21/12/2021 T Z Knowledge 0
ညီမ (၄)ယောက်ရှိတဲ့ အပျိုကြီး အဖွားအိုများ အငယ်ဆုံးလေးက သေသွားရှာပြီ…ကျန်ခဲ့တဲ့ ညီမ (၃) ယောက်က အသီးလေးတွေ ရောင်းပြီ ရှာစားကြတယ်။ အဖွား တယောက် အသီး ရောင်းမကောင်းဘူး ထင်တယ်…ငုတ်တုပ်လေး မှိုင်နေပါတယ်။
အဖွားရေ…အသီး ဘယ်လိုရောင်းတုန်း ဗျ??ကျွဲကောသီး – 1,700 Ks၊ ဖရဲသီး – 6,000 Ks၊ သင်္ဘောသီး – 2,500 Ks၊ နာနတ်သီး – 1,300 Ks သားလေး ရေ… ဟုတ် အဖွား ကျွဲကောသီး နဲ့ နာနတ်သီး အကုန် ယူမယ် အဖွားတို့ရေ….
အဖွား ငယ်လေးမှ…ဝမ်းသာလိုက်တာ… ဟိုတယောက်ဆီ သားတို့ဝယ်လို့ရတဲ့ဟာလေး အရင် သွားဆပ် မယ် ဆိုပြီ…အဖွား အကြီးဆုံးကို ပြောနေရှာတယ်။ အဖွား ဘာတွေ သွားဆပ်မလို့တုန်း…ဘယ်လောက် မလို့လဲ ??
သားရေ… အဖွားတို့က အကြွေး(၂)သိန်းကျော်လောက် ရှိတယ်… ဒီနေ့ကို အကြွေးပေးစားတဲ့ အမျိုးသမီး က ဒီနေ့ တဝက်လာမပေးရင် လိုက်လာမယ်တဲ့…အဖွားတို့ သူ့ကို အရမ်းကြောက်တယ်…သူက အားမနာတမ်း ပြောဆိုဆက်ဆံတာ အဖွား မမကြီးကို စိတ်ပူတာ…သူ နှလုံးရောဂါ ရှိတယ်။
သူ ရှက်ပြီ သေမှာ… ခု သားတို့ ဝယ်သွားတဲ့ 21,000 Ks အရင် သွားပေးပြီ တောင်းပန်ထားမလို့ပါ။ အော…ဟုတ်…ဒါဆို ဒီနေ့ (၁)သိန်း ဆပ်ရမှာပေါ့…ဟုတ်တယ် သားရယ်…အဖွားတို့မှာလဲ မရှိဘူး…ခုမှ များများစားစား ရောင်းရတာ ရတာလေး အရင်ပေးထားမှ…
ဟုတ် အဖွား…ရော့ 100,000 Ks… အဖွားတို့ ယူလိုက်ပါ။ ဟာ…သား တကယ်ပေးတာလား ? တကယ် ပေးတာပေါ့ အဖွားရဲ့….ခု ချက်ချင်း ဟိုတယောက်ကို သွားပေးမယ်…မဟုတ်လို့ သူလာရင် မမကြီး သေလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ သားရယ်… အဖွားတို့ ဘယ်လိုပျော်မှန်း မသိဘူး။
ဟုတ် အဖွား…ဂရုစိုက်ကြပါနော်…သား ပြန်တော့မယ်နော်…အေးပ့ သားရယ်…ဘယ်က ဘယ်လို ပေါ်လာတာလဲ…ဝမ်းသာတယ် ဝမ်းသာတယ်။ အဖွားတို့ (၃)ယောက်….သာကေတ ဇိနမာရ်အောင်ဘုရား နောက်မှာ ရောင်းပါတယ်နော်…သွား အားပေးလိုက်ကြပါအုံး…
(ကျနော်တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင် လှူဒါန်းပေးကြသော (၇)ရက်သားသမီးအားလုံးကို အဖွားတို့ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျ) အော်…ခုချိန် လူငယ်တွေတောင် ခက်ခဲနေကြတာ…သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးအဖွားများအား သနားငဲ့ညာပေးကြပါ။
ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါကကိုပူတူးနှင့်ဘော်ဒါများ ဖုန်း 09-5408437 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်နော်…
ညီမ (၄)ေယာက္ရွိတဲ့ အပ်ိဳႀကီး အဖြားအိုမ်ား အငယ္ဆုံးေလးက ေသသြားရွာၿပီ…က်န္ခဲ့တဲ့ ညီမ (၃) ေယာက္က အသီးေလးေတြ ေရာင္းၿပီ ရွာစားၾကတယ္။ အဖြား တေယာက္ အသီး ေရာင္းမေကာင္းဘူး ထင္တယ္…ငုတ္တုပ္ေလး မႈိင္ေနပါတယ္။
အဖြားေရ…အသီး ဘယ္လိုေရာင္းတုန္း ဗ်??ကြၽဲေကာသီး – 1,700 Ks၊ ဖရဲသီး – 6,000 Ks၊ သေဘၤာသီး – 2,500 Ks၊ နာနတ္သီး – 1,300 Ks သားေလး ေရ… ဟုတ္ အဖြား ကြၽဲေကာသီး နဲ႔ နာနတ္သီး အကုန္ ယူမယ္ အဖြားတို႔ေရ….
အဖြား ငယ္ေလးမွ…ဝမ္းသာလိုက္တာ… ဟိုတေယာက္ဆီ သားတို႔ဝယ္လို႔ရတဲ့ဟာေလး အရင္ သြားဆပ္ မယ္ ဆိုၿပီ…အဖြား အႀကီးဆုံးကို ေျပာေနရွာတယ္။ အဖြား ဘာေတြ သြားဆပ္မလို႔တုန္း…ဘယ္ေလာက္ မလို႔လဲ ??
သားေရ… အဖြားတို႔က အေႂကြး(၂)သိန္းေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္… ဒီေန႔ကို အေႂကြးေပးစားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး က ဒီေန႔ တဝက္လာမေပးရင္ လိုက္လာမယ္တဲ့…အဖြားတို႔ သူ႔ကို အရမ္းေၾကာက္တယ္…သူက အားမနာတမ္း ေျပာဆိုဆက္ဆံတာ အဖြား မမႀကီးကို စိတ္ပူတာ…သူ ႏွလုံးေရာဂါ ရွိတယ္။
သူ ရွက္ၿပီ ေသမွာ… ခု သားတို႔ ဝယ္သြားတဲ့ 21,000 Ks အရင္ သြားေပးၿပီ ေတာင္းပန္ထားမလို႔ပါ။ ေအာ…ဟုတ္…ဒါဆို ဒီေန႔ (၁)သိန္း ဆပ္ရမွာေပါ့…ဟုတ္တယ္ သားရယ္…အဖြားတို႔မွာလဲ မရွိဘူး…ခုမွ မ်ားမ်ားစားစား ေရာင္းရတာ ရတာေလး အရင္ေပးထားမွ…
ဟုတ္ အဖြား…ေရာ့ 100,000 Ks… အဖြားတို႔ ယူလိုက္ပါ။ ဟာ…သား တကယ္ေပးတာလား ? တကယ္ ေပးတာေပါ့ အဖြားရဲ႕….ခု ခ်က္ခ်င္း ဟိုတေယာက္ကို သြားေပးမယ္…မဟုတ္လို႔ သူလာရင္ မမႀကီး ေသလိမ့္မယ္။ ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ သားရယ္… အဖြားတို႔ ဘယ္လိုေပ်ာ္မွန္း မသိဘူး။
ဟုတ္ အဖြား…ဂ႐ုစိုက္ၾကပါေနာ္…သား ျပန္ေတာ့မယ္ေနာ္…ေအးပ့ သားရယ္…ဘယ္က ဘယ္လို ေပၚလာတာလဲ…ဝမ္းသာတယ္ ဝမ္းသာတယ္။ အဖြားတို႔ (၃)ေယာက္….သာေကတ ဇိနမာရ္ေအာင္ဘုရား ေနာက္မွာ ေရာင္းပါတယ္ေနာ္…သြား အားေပးလိုက္ၾကပါအုံး…
(က်ေနာ္တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ လႉဒါန္းေပးၾကေသာ (၇)ရက္သားသမီးအားလုံးကို အဖြားတို႔ ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗ်) ေအာ္…ခုခ်ိန္ လူငယ္ေတြေတာင္ ခက္ခဲေနၾကတာ…သက္ႀကီး႐ြယ္အို အဖိုးအဖြားမ်ားအား သနားငဲ့ညာေပးၾကပါ။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါး အဖိုးအဖြားမ်ားအတြက္ အတူအကြ ပူးေပါင္း ကူညီလႉဒါန္းလိုပါကကိုပူတူးႏွင့္ေဘာ္ဒါမ်ား ဖုန္း 09-5408437 သို႔ဆက္သြယ္လႉဒါန္းႏိုင္ပါတယ္ေနာ္..
ခိုင်နှင်းဝေရင်သွင်းလေးများဂေဟာသို့ ထိုင်းသံအမတ်မှ အလှူငွေများ လှူဒါန်း
နေပူပူ၊မိုးရွာရွာထဲမှာ မိခင်ဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်း စျေးရောင်းရင်း ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကို ရုန်းကန်နေရပြီဖြစ်တဲ့ ၈ နှစ်အရွယ် ကောင်လေး